Gaalamootni Habashaa Waraana Sobaan Boo’aniif Argatan – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGaalamootni Habashaa Waraana Sobaan Boo’aniif Argatan
Damee Boruu: Muddee 02/2020
Gaafa diraamaa sobaan Amhaarri Gulisoo keessatti gurmuun aajjefame jedhamee waraanaaf mana maree uummata yaroon isaa darbe keessatti dibbeen rukkutamaa ture gaalamootni Habashaa wayyaa guaracha ufatanii diramaa booyichaan wal makaa gochaa turan ija koo duraa baduu dide.Booyichi isaanii fakkeessuu tahu iyyuu ammam akka dhiiga nama biyya isaanii dhangalaasiisuuf hawwii qaban agarsiisa. “Amma dhufanii nu ajjeesan teenyee eegannaa” jedhanii imimaan sobaan fuula of dhiqaa turan. Yoo dhiigni dhangala’u kan isin gammachiisu tahe BAGA GAMMAADAN waraana dhala dhala keessaniin hin goolabamne argatan. Haalli isaan gochaa turan biyyaa sanaafis tahe uummata sanaaf waan baayyee garaa nama kutu dha. Utuu namni tokko bineesa kana keessaa dhalachuu haale irra hin ilaalamu.
Guyyaa sana namoonni akkuma koo qalbiin hubatan jiraachuun ni mala. Tooftaan warri nafxanyaa dubbii Uummatani Amhaaraa bakka bakkatti ajjeefaman jedhamee oddeefamu kan eegale qabata godhatanii Uummata Amhaaraa hidhachiisanii uummata olla isaa irratti waraana bobbaasuuf akka tahe ifa jira. Garuu isaan waan hubaman fakkeessanii yoo iyyaan gargaarsaa waan argatan itti fakkaatee daandii kana jabeessanii hordofaa jiru. Akkuma barbaadan Damaqaa Mokonnenii itti Anaa Mumichi Ministeeraa fi Abuna Maatiyoos Hooganaan mana Amaniti Ortoodoksii ifatti Uummatni Amhaaraa hidhachuu qaba jedhanii labsaniiruuf. Haa tahu malee Uummatni Amhaaraa yaroo itti hidhanaa hiikatee akka hin jire hundi keenya beekna.
Erga Damaqaa Mokonnon fi Abuna Maatiyoos ifatti Uummata Amhaaraa hidhachiisanii booda uummata Naannoo Beenshangul keessatti jiraatan irratti ajjeechaa hamaan raawwataama jira. Uummatni Oromoo konkolaataa irraa buusamanii yaroo qalamaan gaalamootni Habashaa mana maree PP keessa taa’anii sobaa boo’aa oolan ajjeechaa Oromoo kaasani dubbachuuf illee fedhii hin qaban. Oromoo irratti akka dulamuuf garuu imiimaan sobaan fuula of dhiqu. Warri nama keessa kosii tahan kun kan hin hubannee Oromoo irratti waraanni waggaa lamaa ol akka deemaa ture dha. Isaan mana maree keessa kan jiran mindaa argachuuf malee hojii uummataa fi biyyaa hojjechuuf miti. Isaanii bakki sun bakka itti hiribaa of irraa dabarsanii horii argatan malee bakka uummataaf hojjetan akka hin taane isaanuu beeku. Utuu itti gaafatama uummataa fudhatanii hojii biyya ijaaruu kan hojjetan tahee gaafa J. Biraanuu Julaa torbaan lama keessatti waraana Walagaa nan fixa jedhee maaliif akka fixxuu dhabee gaafachuutu isaan irraa eegama ture.
Gaalamootni Habashaa kun wayyaa guaracha ufatanii waraanaaf sobaan boo’aa turuun isaan waan nama ajaa’ibu haa tahu malee ergaan isaan diraaman Gulisoo waraana Tigray irratti labsuuf qophii godhamuuf mijjeessuu dha. Waraana sobaan boo’anii argatan! Waraana torbaan sadii booda yaroo Mumichi Ministeeraa kan yaroon irraa dhumate mana maree isaanii deebi’ee dhaqu gaalmootnni Habashaa yaroo darbee ufata guaraacha ufatanii boo’aa turan ufata adii ufatanii illichaa jiru. Gammachuun isaanii kun maal irra madda? Kan dhumaa jiru gama lamaanu uummata biyya isaanitti. Namni lamaa fi sadiin du’e jedhee warri boo’uu namni kumaatama dhibaan yaroo dhumu dhugaa boo’uu hin qabanii?
Dhugaa dubbachuuf Gulisoo keessatti namoonni Amhaaraa tahan ajjeefaman kan jedhu malee namni tokko illee du’uu isaaf ragaan amma har’a argame hin jiru. Waraana torbaan sadii ol godhame kana keessatti garuu yoo xiqqate namni Itoophiyaa Amhaaraa fi Tigray dabalatee namni kuma dhibaa ol akka du’u ni tilmaama. Warra kana keessa harka guddaan isaa qotee bulaa, miliishaa fi liyuu Haayilii Amhaaraa lafa fudhata jedhanii akka jaldeessaa fanjii irraa oofaa turan akka tahe gaaffii hin qabu. Mee dhugumaa Amhaaraa kana iyyuu yoo kan jaalatan tahee maaliif dhumaatii isaa kanaaf hin gaddan? Yoo wayyaa gurraacha ufachuun gadda kan agarsiisu tahe namni an Itoophiyaa ofiin jedhu hunduu wayyaa gurraacha ufachuu qaba ture.
Akka hubannaa koo yoo tahe mootummaa fi namni mootummaa wajjin hojjetan biyya sana keessatti namummaa keessaa bahanii bineensa tahanii jiru. Namni gara bineesummaa itti jijjiramee jira yoo jedhame dhugaa irraa fagoo hin jiru. Waan Impaayeera sana keessatti deemaa jiru kan biyya lafaa irra adda. Aaddan walii gadduu, walii yaaduu, wal obsuu, wal dhiisuu, wal mararafachuu tasa bade jira. Namni hunduu badii walii kan hawwaa jiruu fi wal dhabamsiisuu irratti kan bobba’ee jiru fakkaata. Namni sanyiin wal jibba jedhee yaaduun na rakkisaa jira. Nafxanyoon aangoo deebisanii dhuunfachuuf ifatti uummata Impaayeera sanaa hunda irratti ifaan tahe ifaan ala jibinsa oofaa jiru. Tooftaan isaanii kun gaaga’ama malee bu’aa hin qabuuf. Walii gala biyyicha diiganii gargar facaasuuf akka deemaa jiran waan hubatan hin fakkaatu. Of arguuf yaroo isaanii haa fudhatan.
Yakka PPn Uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu baayyee suukkaneessaa fi gadsisaa dha. Waan deemaa jiru dhaga’uun baayyee nama rifachiisa. Ilmaan Oromoo qaroo tahan mana hidhaa keessaa fudhanii ajjeessuun seera biyya lafa irratti cubbuu guddaa nama gaaffachiisu. Seeraa fi heeraa tokko malee abbaan barbeede nama ajjeessuun hojii mootummaa baayyee karaa kan baasuu fi shorkokeessumaatti kan jijjiru dha. Warri har’a hojii fokkisaa kanaan jireenya jiraachaa jirtan boruu hojii keessan kanaan fanifamuuf deemtu. Mootummaa PP boola irra dhaabbatee kerkeraa jirtu kana miti mootummaan gargaarsa uummataa qabu iyyu ni kufa.
Yoo akka harree amma jirru nyaannee duuna jettan hojii keessan fokisaa kana itti fufaa. Waa isin hin hubanne tokko uummata tufatanii itti sirbaa jirtan kana duwwaa utuu hin taane hojii keessan fookkisaa kana biyyi lafaas isini irratti jibbee jira. Hoogganan PP keessan biyyi lafaa irratti sobaan tokkoffaa tahee badhaasa gara biraa akka argachuuf deemu hin dagatiina. Waan barbaade fidee yoo isin ule dhugaa gootanii hudduu of dhiitaa ooltu. Hojii keessan yaroon itti argatan fagoo hin jiru.
Waraanni dhumee Maqalee qabanee jirra isinii jedhe. Hin jarjariina. Waraanni ni jalqabe malee hin dhumne. Keessatti, poolisii Oromoo, humnaa addaa fi maqaa RIB warri Oromiyaa keessatti hammenya suukanneessa uummata keenya irratti raawwachaa jirtan Waaqayyoo hojii keessan yaroo gabaaba keessatti isinii keenna. Maaloo qaroo Oromoo hin fixxina. Gaafa tokko warra kanatu biyyaa keessa jiraatan ijaaree isin sora. Cubbuun kan arba ajaja utuu hin taane mataa isa ajjeesee gubaa waan jiruuf warri nama ajjeesuu hojii godhatan dhaaaba.
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaa Ti!
ODM: Dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo irratti
ODM: Dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo irratti - Caamsaa 24, 2020 Waraana Habashoonni Oromiyaa Keessaatti dhoosuuf…
Tarkaanfii WBOn Waraana Gabroomfataa Irratti Guyyaa Arfan Darban Fudhate Cuunfaa guyyaa afuran darbani: WBOn kan…
WBOn Zooni Kibbaa Waraana Wayyaane 50 ol Ajjeese
WBOn Zoonii Kibbaa Ebla 03,2018 Waraana Gabroomfattuu Wayyaanee Maqaa Sakattaa Jedhuun Itti Bobba’e Haleelee Loltoota…